ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၁၇ )
(သူရိယနေ၀န်း၊ သစ်ခက်သံလွင်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဒါပေမဲ့လည်း တခါတခါကြားလိုက်တဲ့အသံတွေက ရင်ထဲထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လာထိမှန်တဲ့အခါ၊ မခံစားနိုင်လောက်အောင် နှလုံးသားထဲ စူးစူးနစ်နစ်။ လူသားတွေအတွက် သေခြင်းဟာ လည်း မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်၊ မရောက်သင့် တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားတာကို ကြားလိုက်ရတဲ့ အခါ....။
ဒီလို ဘဝတွေရောက်အောင်ဘယ်သူတွေကဆွဲခေါ်သွား ကြတာလဲ။ တရားခံတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။
ပြောနိုင်တာကတော့ လူကိုလူချင်းမစာနာနိုင်တဲ့လူ့အတ္တ၊ လူ့ ဗာလတွေကို လက်ညှိုးထိုးရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလူ့ဘဝရုပ်အလောင်းတွေ ခေတ်မြေပြင်မှာ မမြင်ရက်စရာ ကောင်းအောင်ပြန့်ကြဲခဲ့ကြ၊ ပြန့်ကြဲနေကြ၊ အခု ထက်ထိလည်း တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေကျနေတုန်းပါပဲ။
နာမယ်ရှိတဲ့အလောင်းတွေ၊နာမယ်မရှိတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ အနိဋ္ဌာရုံပန်းချီကားတချပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမြင်ကွင်းကို ကဗျာဆရာမ ရွှေပိုးအိမ် (ပဲခူး) က ရုပ်အလောင်းများ နဲ့ မြင်အောင်ပြသွားပါတယ်။
ဟိုး အမြင့်ကြီးကနေ တဖြည်းဖြည်း
ငါ့ သခင်ဆိုသူကို တွေ့ရတော့မှာလား
ဘဝတခုကကြွေသွားခဲ့ရရှာပြီ။ ဘဝကဆင်းရဲသလိုကံကြမ္မာကပါလိုက်ဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝတွေအားလုံးကို မြန်မာ ပြည်မှာမွေး၊မြန်မာပြည်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပေမယ့် သူတပါးနိုင်ငံမှာကျွန်အဖြစ်သွားပြီး မိသားစုကို ကျေးဇူး ပြန်ဆပ်ဖို့အတွက် ဘဝပါ စွန့်လွှတ်လိုက်ရသူ မဇင်မာဦးဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးက မီးမောင်းထိုးပြ လိုက် သလိုပါပဲ။
သူမအဖြစ်ကကြားတဲ့လူတွေကိုရင်ထဲနင့်နေအောင်ကြေကွဲရစေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မိခင်ကလည်း စောစီးစွာလူ့ဘဝကထွက်ခွာသွားခဲ့ရသလို၊ ဖခင်ကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားတော့ အသက် ၈၀ နီးပါး ဖြစ်နေတဲ့အဘိုး အဘွားလက်ထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့မဇင်မာဦး။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် သွား လုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ရှင်တွေရဲ့ လူမဆန်စွာ၊ နှိမ့်ချ ကျွေးမွေးဆက်ဆံတာကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံး တိုက်အမြင့်ကြီး အပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ မဇင်မာဦးလို သူတပါးနိုင်ငံမှာ ဘဝတွေပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသူတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိမလဲဆိုတာတွေးမိရင် ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုပျောက်ကွယ်ခဲ့ရရှာတဲ့ဘဝတွေအတွက် ပြန်တရားစွဲ ဖို့ စဉ်းစားမိတော့ တရားခံရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို ကဗျာဆရာမ အ်ိန်ဂျယ်လင်းက တရားခံမရှိ ခေတ်ထဲက ခေါင်းစဉ်ပျောက်ကဗျာ နဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ သူတပါးတိုင်းပြည်မှာသေဆုံးသွားပြီလို့ ရေးဖွဲ့လိုက် ပါတယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးကိုတကယ်ရခဲ့ပြီလား။ သူ့ကျွန်ဘဝက အမှန်တကယ်လွတ်မြောက် ခဲ့ပြီလား။ ကျနော်တို့အတွက် အခုအချိန်မှာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါပြီ။
နိုင်ငံအနေနဲ့ အမည်နာမအရ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားထောင်သောင်း နဲ့ချီအောင် သူတပါးတိုင်းပြည်မှာ ကျွန်သွားခံနေရတာကို ပြန်စဉ်းစားမိရင် အရမ်းရင်နာစရာကောင်းပါ တယ်။ နိုင်ငံကလွတ်လပ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ ဆင်းရဲမှုနွံထဲက မလွတ်မြောက်နိုင်သေးပါဘူး။
သူတပါးနိုင်ငံမှာ အနှိမ်ခံလူတယောက်အနေနဲ့ ရှင်သန်မှုအတွက် ရုန်းကန်နေရတာကို လူသား အချင်းချင်း မစာနာနိုင်ကြတာတွေ ကြားနေမြင်နေရတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးဆင်းရဲတွင်းထဲက လွတ်မြောက်စေချင်စိတ် ပြင်းပြစွာဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က သွေးပျက်ဖွယ်အနာတရများ ကဗျာကို ကဗျာဆရာမ၊ စာရေးဆရာမ ဆွေရည်လင်းက ရေးဖွဲ့တာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
Oh my god !!! Oh my god !!!
စင်ကာပူ ၁၉ လွှာပေါ်က
အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ
သူ အဝေးကတောင် ငေးမောဖူးပါရဲ့လား
လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာတွေက အရမ်းကိုကွာခြားလွန်းပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာတွေကိုပဲ အပြစ်ဖွဲ့ရ လေမလား၊ လူ့လောကမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပဲ အပြစ်ပြောရမလား။
စာရေးဆရာမကြီး စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) နှစ်ပေါင်းများစွာက ကဗျာတပုဒ်ရဲ့အပိုဒ်တပိုဒ်ကို ပြန်တွေးမိလိုက်တယ်။
မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စားစရာမရှိတဲ့လူတွေ အရမ်းများပါတယ်။ ထားစရာမရှိသူအနည်းစုပါ။
ဒီလိုစားစရာမရှိတဲ့လူတွေများနေတာ၊ ထားစရာမရှိတဲ့လူရေတွက်လို့ရနိုင်အောင် နည်းနေတာ ကံကြမ္မာတွေရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုလား။ လူတစုရဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုကြောင့်လား။ လူလည်တွေချမ်းသာပြီး၊ လူအတွေဆင်းရဲနေကြတာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ လူအတွေပိုများနေပါတယ်။
လူအတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့။ ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆင်းရဲတွင်းထဲက ဆွဲမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် လူအတွေ ပိုပိုပြီး များလာမှာပါ။
လူအတွေကို လူလည်တွေဖြစ်မလာစေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူကို လူချင်း ကူညီနိုင်ဖို့တော့ လို ပါတယ်။ လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာ တရား ထားဖို့ကို တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်တဲ့ကဗျာကို လူသား ချင်းကူညီ စိတ်ထားတဲ့ ပရဟိတအမျိုးသမီးငယ် တယောက်က ရေးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။
စည်းကမ်းရှိစို့၊ နိုင်ငံအတွက် လက်တွဲညီစို့
ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာကတော့ ခင်နှင်းကြည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာခေါင်းစဉ်ကလည်း ညီမလေးမှ တဆင့် တဲ့။
ဘဝကိုပါစတေးသွားရှာသူ မိန်းမငယ်လေး ဇင်မာဦး များကို နာကျင်စွာ ကြေကွဲမှတ်တမ်းရေး လိုက်ပါ တယ်။
သည်ကဗျာများကို သက်ဆိုင်ရာ ကဗျာရေးသူများ၏ ဖေ့ဘုတ်မှ ကူးယူခံစားရေးပါသည်။
သူရိယနေဝန်း -Vol 1.No 153. 24 June 2017
Critics Ko Nine Poems